Author: Rijan Bhujel
January 4, 2022 January 4, 2022 Rijan Bhujel0
प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव भव्य रुपमा मनाईने ख्रीष्टमस कार्यक्रम विलिभर्स इष्र्टन चर्चमा सम्पन्न भएको छ । दिप प्रज्जवलनबाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम नेपालको राष्ट्रिय गान सँगै अगाडि बढेको थियो । बाईबल धर्मशास्त्र यूहन्ना ३ः१६ पदबाट “परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो” भन्ने विषयमा प्रवचनको साथमा ख्रीष्टमस शुभकामना रेभ.फा.शशीधर चापाईले दिनुभएको थियो । विलिभर्स इष्र्टन चर्चद्वारा गरिएको कार्यक्रममा […]
June 23, 2021 Rijan Bhujel0
पोखरा, आसार ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ र सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्नमा उपभोक्ताहरुलाई निषेधाज्ञा को समयमा दिंदै आएको छुट बन्द गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै आएको भन्दै अब खाद्यान्नमा उपभोक्ताहरुलाई छुट नदिने निर्णय गरिएको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको बिक्री केन्द्रहरुबाट नुन, तेल, चामल, पिठो, […]
सुपरस्टार प्रभास विवाह को तयारिमा
February 8, 2021 Rijan Bhujel0
साउथ फिल्मका सुपरस्टार प्रभास विवाह गर्दै छन् । हालै भारतीय मिडियाले एउटा यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको छ जसमा प्रभासको विवाह हुन लागेको खबर प्रकाशित छ । भारतीय मिडियामा प्रकाशित खबरलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रभास अब चाँडै नै विवाहको तयारीमा छन् । टलिउड डट नेटको रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने प्रभास अमेरिकास्थित एक सफ्टवेयर कम्पनीका […]
दिनहुँ ८ हजार फेसबुक एप प्रयोगकर्ताको मृत्यु ?
January 30, 2021 January 30, 2021 Rijan Bhujel0
यस २१ औँ शताब्दीमा सोसल मिडिया : फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप० जस्ता साइटहरु एकदमै लोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन् । एक तथ्यांकका अनुसार फेसबुकमा ३ करोड अकाउन्ट यस्ता मानिसका छन् जसको मृत्यु भइसकेको छ । सो तथ्यांक अनुसार हरेक दिन ८ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताको मृत्यु हुने गरेको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने […]
January 8, 2021 Rijan Bhujel0
एजेन्सी । अमेजनका मालिक जेफ बेजोसलाई पछि पार्दै कार कम्पनी टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्क संसारकै धनी व्यक्ति बनेका छन् । ब्लुमबर्गले जारी गरेको धनाढ्यको सूचीमा ४९ वर्षका मस्क पहिलो नम्बरमा पुगेका हुन् । सूचीमा विश्वका ५ सय अर्बपति छन् । गत वर्षदेखि टेस्लाको सेयरमा ८ गुनाभन्दा धेरै वृद्धि भइसकेको […]
January 6, 2021 Rijan Bhujel0
भारतका विभिन्न ठाउँमा पन्छीहरुमा फ्लू देखिएपछि त्यहाँ हजारौँ पन्छीहरू मार्न थालिएको जनाइएको छ। त्यहाँ धेरै सङ्ख्यामा चराहरू मरेको देखेसँगै अधिकारीहरूले एक साताअघि फ्लू भएको थाहा पाएका बताइएको छ । भाइरसले अन्य प्रजातिका पन्छीमा समेत असर पारेको छ। त्यहाँ मानिसहरूलाई मरेका वा बिरामी देखिएका चराहरू नछुन भनिएको छ। केही जिल्लाहरूमा पन्छी बिक्री गर्ने पसलहरू समेत बन्द […]
January 6, 2021 January 6, 2021 Rijan Bhujel0
ईकमर्स जायन्ट अमेजनले प्रयोगकर्ताबाट हुने अर्डरलाई चुस्त बनाउन थप ११ जेट खरिद गर्ने भएको छ । कम्पनीले डेल्टा एण्ड वेस्टजेट एयरलाइन्स कम्पनीमार्फत सो संख्यामा विमान खरिद गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार आफ्नो डेलिभरी नेटवर्कलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले प्लेन खरिद गर्न लागिएको हो । यसअघिसम्म विभिन्न कम्पनीसँग प्लेन भाडामा लिएर सामान डेलिभरी गर्दै आएको कम्पनीले […]
देशभर ४१९जनामा थप कोरोना संक्रमण , सक्रिय संक्रमितको संख्या ५७११
January 2, 2021 Rijan Bhujel0
पोखरा पुष १८ गते । ( नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४१९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ६१ हजार ४३८ पुगेको छ । ५ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अनुसार हालसम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ […]
के हो बीमा ? जानीराखौँ
December 31, 2020 Rijan Bhujel0
आर्थिक नोक्सान हुँदा दिइने क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टीलाई सामान्यतया बीमा भन्ने गरिन्छ । बीमा गर्दा बीमित (बीमा गर्ने व्यक्ति) र बीमक (बीमा गरिदिने कम्पनी) बीच सम्झौता हुन्छ । भोलि कसलाई के हुन्छ भन्ने निश्चित नै छैन । आर्थिक तथा भौतिक क्षति जे पनि हुन सक्छ । त्यसैले भोलिका दिनहरुमा सम्भावित जोखिमबाट बच्न गरिने एक प्रकारको सुरक्षाको सम्झौतालाई […]